बढ्दै विद्युतीय फोहोरको थुप्रो
नेपालीले उत्सर्जन गर्छन् नौ सय ग्राम एकै वर्षमा २४ लाख किलो फोहोर
काठमाडौँ, असोज २६ गते । मोबाइल, ल्यापटपलगायत विद्युतीय उपकरणको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युतीय फोहोर (ई–वेस्ट)को पनि थुप्रो लाग्न थालेको छ । प्रयोगविहीन भएपछि फोहोरका रूपमा रहने यस्ता उपकरणबाट स्वास्थ्य जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले विश्वभर नै यो चिन्ताको विषय बनेको छ । खासगरी यस्ता उपकरणको पुनः प्रयोगको नीतिको अभावमा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुक थप सङ्कटमा पर्नसक्ने एक अध्ययनले जनाएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय फोहोरको उत्सर्जन बढ्दै गए पनि यसलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन तथा नीतिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा प्रतिव्यक्ति विद्युतीय फोहोर उत्पादनमा भने नेपालको स्थान तलै छ । नेपालभन्दा तल रहेको अफगानिस्तानमा प्रतिव्यक्ति छ सय ग्राम मात्रै विद्युतीय फोहोर उत्सर्जन भइरहेको छ भने श्रीलङ्कामा सबैभन्दा धेरै छ किलो चार सय ग्राम उत्सर्जन भइरहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी विद्युतीय फोहोरको अवस्था झन् सङ्कटोन्मुख छ । सन् २०१९ मा मात्रै विश्वभर पाँच करोड ३६ लाख मेट्रिक टन यस्तो फोहोर उत्सर्जन भएको छ । जुन चार वर्षअघि सन् २०१६ मा चार करोड ८२ लाख मेट्रिक टन थियो । सन् २०३० सम्म यस्तो फोहोरको परिमाण सात करोड ४० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
फोहोर उत्पादन एसिया सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ सन् २०१९ मा मात्रै दुई करोड ४९ लाख मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन भएको छ । त्यसपछि अमेरिकामा १३.१, युरोपमा १२, अफ्रिकामा २.९ र ओसेनियामा ०.७ मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छिमेकी मुलुक चीन सबैभन्दा धेरै विद्युतीय फोहोर उत्पादन गर्ने देशमा परेको छ, जहाँ सन् २०१९ मा मात्रै १० हजार १२९ किलो मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन भएको छ । विश्वमा ७८ देशले मात्र विद्युतीय फोहोर सङ्कलन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
विद्युतीय फोहोरको पुनः प्रयोगसँग सम्बन्धित नीतिको अभावमा ठूलो रकम खेर गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१९ मा उत्सर्जन भएको कुल फोहोरमध्ये केवल १७.४ प्रतिशत अर्थात ९३ लाख मे. टन मात्र पुनः प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क छ । विश्वभर उत्सर्जन हुने यस्तो फोहोरको ठूलो मात्रा सङ्कलन नहुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विद्युतीय फोहोरबाट कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वस्तु सङ्कलन गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै सन् २०१९ मा ५४ अर्ब डलर आम्दानी हुन सक्ने प्रतिवेदनमा अनुमान छ । यद्यपि पुनः प्रयोग गरिएको ९३ लाख मेट्रिक टन फोहोरबाट १० अर्ब डलर बराबरको कच्चा पदार्थ प्राप्त भएको पाइएको छ ।
विद्युतीय फोहोरमा समावेश हुने मर्करी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यसबाहेक विश्वव्यापी जलवायु परिर्वतनमा पनि यसको भूमिका हुने र समग्र वातावरणीय स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यस्ता फोहोरले खराब असर गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रलाई दशैँको आड
इन्टरनेटको तार नकाटिने
दशैँलाई नेपालकै लुगा !
भारतबाट नेपालमा पहिलो पटक निजी कार्गो रेल वीरगञ्ज आइपुग्याे
‘बजेटले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झिएको छ’
एनसेलले एक अर्ब ११ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने